Ogaden News Agency (ONA) – Dalka Suuriya oo Xabad-Joojintii Ugu Horaysay Ay Ka Hir-Gashay.
Dalka Suuriya oo Xabad-Joojintii Ugu Horaysay Ay Ka Hir-Gashay.
Wadanka Suuriya ayay ka dhaqangashay xabbad joojintii ugu weynayd ee ugu horreysay oo ku meel gaadh ah oo halkaasi ka dhacda shantii sano ee uu dalkaasi ka socday dagaalka sokeeye. Xabbad joojinta ayaa waxa ay bilaabatay habeen hore saqdii dhexe, iyadoo wararka hordhaca ah ee soo baxayana ay sheegayaan in furumaha hore ay xaaladdu degan tahay.
Ergayga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee Suuriya, Staffan de Mistura, ayaa sheegay in dagaalku uu qaboobay hasayeeshee la baarayo hal xadgudub oo ka dhan ah xabbad joojinta. Madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama, oo hadlayay ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee xabbad joojinta ayaa waxa uu ka digay in caalamku uu daawan doono dowladda Suuriya iyo xulafadeeda Ruushka.
Xabbad joojinta ayaa waxa ay u dhaxaysaa dowladda iyo kooxaha fallaagada, hasayeeshee xabbad joojintu kuma jiraan kooxda Dowladda Islaamiga ah (Daacish) iyo kooxda lala Al-qaacidah ee Nusra Front. In ka badan 250,000 oo Suuriyiin ah ayaa colaadda sokeeye ee dalkaasi lagu dilay halka malaayiin qof oo kale ay guryahoodii ka barakaceen.
Saacado un kaddib markii la dhaafay waqtigii kama dambeysta ahaa ee xabbad joojinta ayaa gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa waxa uu laba qof ku dilay meel ka baxsan magaalada ay dowladda gacanta ku hayso ee Salamiyeh ee u dhaw magaalada Xamaa, sida ay ku warramayso warbaahinta dowladda. Sikastaba ha ahaatee, xabbad joojinta ku meel gaarka ah ayaa maanta u muuqata mid dhaqangashay.